Zimbabwe Revokes Feingold's Visa - Huron Daily Tribune
The government of Zimbabwe canceled a travel permit for Sen. Russ Feingold on Thursday, saying the lawmaker's scheduled visit would interfere with the nation's preparation for an election.
Feingold, D-Wis., a member of the Senate Foreign Relations Committee, had planned to visit Zimbabwe later this month to educate himself on the pre-election process, according to his office.
But Feingold received a letter from the Zimbabwe Embassy informing him that visa was being withdrawn and that the time "period would not be ideal for your visit as most government officials are tied down with preparations for presidential elections."
Feingold said the Zimbabwe government is acting as though it has something to hide.
"The regime in Harare has shown that it is willing to destroy the Zimbabwean economy, to violently repress the Zimbabwe people, to harass the press and to undermine the rule of law," Feingold said.
Human rights groups believe that 16 people died in political killings last month in Zimbabwe, the most in two years of violence that the opposition blames on supporters of President Robert Mugabe's ruling party.